समस्यासँग जुध्न आफैलाई ऊर्जाशील बनाऔं !
आजभोलीको तत्कालीन समस्या नै सबैको के हुन्छ भने समाज र परिवारमा छाएको अभाव र बिपन्नताबाट कसरी छुटकारा पाउने हो । वास्तवमा रातोदिनको सारा दौडादौड नै यसैको निमित्त भइरहेको हुन्छ । अनि भावी सन्ततिको उज्वल र सुनिश्चित भबिष्य निर्माण गर्न के गर्ने हो भन्ने चिन्ता । बस्तुतः यी समस्याबाट निरापद र सुबिकसित जीवन जिउन के कसरी सम्भव हुन सक्छ ? प्रायः धेरैजसो समाज बैज्ञानिकहरुले यी उल्लिखित समस्या या कठिनाईहरुको कारण अभावग्रस्तालाई मानेका छन् । यस मान्यताले के भन्दछ भने साधन, श्रोत र सुबिधाहरुले सुसज्जित सम्पन्न समाज निर्माण गरियो भने यो अभिष्ट पूरा हुन सक्तछ र सबै प्रसन्नतापूर्वक रहन सकिने स्थिति बन्दछ । मोटा मोटीरुपमा यही कुरा सही लाग्दछ ।
वास्तबमा अशिक्षा, गरीबी, अभाव र असुरक्षा नै आजको अधिकांश मानिसहरुको गए गुज्रेको जीवन स्थितिको मूल कारक मानिन्छ । यी समस्याहरुको एकीकृत निवारण र निराकरणका लागि ठोस, सही र प्रभावकारी नीतिको आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वको हुन्छ नै । किनभने बस्तुस्थितिलाई ठीक र सही किसिमले नुबझिकन र वास्तबिक बाधाहरु के के छन् ती नठम्याइकन जतिसुकै प्रवल प्रयत्न गरिए पनि या गर्ने योजना बनाए पनि त्यसको कुनै सार्थकता हुदैन । हुन त ठीकसँग सदुपयोग गर्ने हो भने मानिसको शारिरीक, मानसिक र अझ भनौ बौद्धिक क्षमता यति धेरै हुन्छ कि त्यसको सदुपयोग गरेर मानिसले आफ्नो, परिवारको र समाजको लागि ठूलो योगदान दिन सक्तछ । समस्या हल गर्न सक्तछ । आफ्नो मेधा र सीपलाई समाजको हितमा लगाउन र सामयिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्तछ । यसो गर्नु नै प्रगतिशीलता र परमार्थको काम पनि हो । तर समाजको हित गर्नलाई समाजको अहित गर्ने कुराहरु के के छन्, के के हुन सक्तछन् त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्दछ । अनि मात्र ती बाधा ब्यवधानलाई के कसरी पञ्छाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ ।
निश्चय नै उचित र अनुकूल बातावरण बन्यो भने प्रगतिशील मानिसहरुमा यस्ता असंख्य मानिसहरु हुन्छन् जसले आफुसँग केही साधन श्रोत नभए पनि र कसैसँग केही सहारा या सहयोग नलिकइकन पनि आफुलाई र समाजलाई फेर्न र बदल्न ठूलो योगदान दिन सक्तछन् । यस्ता धेरै उदाहरण बिश्व समाज र हाम्रै वरिपरीको समाजमा पनि हामी देख्न सुन्न पाउँदछौं ।
समस्यालाई सही किसिमले बझेपछि र त्यसलाई कसरी कम गर्ने या पूरै हटाउने कुरा बोध गरेपछि आफ्नो उच्च मनोबल र पुरुषार्थको आधारमा अगाडि बढ्न सकिने स्थिति र बिश्वास बन्दछ । सफलताको बाटो त्यसरी नै तय गरिन्छ । निराशाको बाटोबाट केही पार लाग्दैन । त्यसैले मानिसले आशाबादी हुनु पर्दछ भन्ने गरिएको पनि हो । यस्तै मानिसले सामाजिक या जन सहयोग पनि प्रायः जुटाउने र पाउने गर्दछन् । तर आलस्य, अकर्मण्यता र निराशाको बोझ बोकेर कोही पनि अघि बढ्न सक्तैन । बिघ्न बाधाहरु पनि हटाउन सक्तैन । यो कुरा एकदमै ध्रुब सत्य कुरा हो । प्रयत्न असल कामका लागि सद्बिबेक र सद्बिचारका आधारमा गरिनु पर्दछ । त्यस्तो कामले नै सराहना, प्रसंशा र बधाई पाउँदछ र पाउनु पर्दछ अनि थप काम गर्ने उत्साह र आत्मबिश्वास पनि त्यसले जगाउँदछ र जगाउनु पर्दछ । यसरी जनता जगाउन सकियो र सिकियो भने समाजले उपलब्धी पाउने निश्चित छ ।